लूका ९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
९ तब उहाँले बाह्रै जनालाई एकसाथ बोलाउनुभयो र सबै दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउने अनि रोगबिमारहरू निको पार्ने शक्ति र अख्तियार तिनीहरूलाई दिनुभयो।
२ अनि परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्न र निको पार्न उहाँले तिनीहरूलाई पठाउनुभयो
३ र भन्नुभयो: “यात्राको लागि केही नबोक। न लौरो, न खाजाको पोको, न रोटी, न चाँदीको पैसा, न दुईसरो लुगा।
४ तर जुन घरमा तिमीहरू पसौला, त्यो ठाउँ नछोडेसम्म त्यसै घरमा बस।
५ अनि जुन ठाउँमा मानिसहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गर्दैनन्‌, त्यस सहरबाट निस्कँदा तिनीहरूविरुद्ध साक्षीको निम्ति आफ्नो पैतालाको धूलो टकटकाइदेओ।”*
६ त्यसपछि तिनीहरू एकपछि अर्को गाउँ हुँदै पूरै इलाकामा जताततै सुसमाचार सुनाउँदै र रोगबिमारहरू निको पार्दै हिंडे।
७ जब प्रान्तीय शासक हेरोदले* यी सबै घटनाबारे सुने, तब तिनी साह्रै अन्योलमा परे, किनकि कसै-कसैले यूहन्ना मृत्युबाट ब्यूँतिएका हुन्‌ भन्थे।
८ अनि अरू कसैले चाहिं एलिया देखा परेका हुन्‌ भन्थे भने कोही-कोहीचाहिं पहिले-पहिलेका भविष्यवक्ताहरूमध्ये कोही एक जना फेरि जीवित भएका हुन्‌ भन्थे।
९ हेरोदले भने: “यूहन्नाको त मैले टाउको काट्‌न लगाइसकेको थिएँ। त्यसोभए कसको विषयमा म यस्तो कुरा सुन्दैछु?” त्यसैले तिनले येशूलाई हेर्न खोजिरहेका थिए।
१० प्रेषितहरू फर्केपछि तिनीहरूले आफूले गरेको कामबारे उहाँलाई बताए। तब तिनीहरूलाई लिएर उहाँ बेथसेदा नामको सहरमा कुनै एकान्त ठाउँमा जानुभयो।
११ तर भीडले यो कुरा थाह पायो र उहाँको पछि लाग्यो। तब उहाँले तिनीहरूलाई माया गरेर स्वागत गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यबारे सिकाउन थाल्नुभयो। अनि उपचारको आवश्यकता भएकाहरूलाई निको पार्नुभयो।
१२ जब दिन ढल्न थाल्यो, तब बाह्रै जना उहाँकहाँ आएर भने: “भीडलाई बिदा गर्नुहोस्, ताकि नजिकैका गाउँ-बस्तीहरूतिर गएर तिनीहरूले गाँसबासको बन्दोबस्त गरून्‌, किनकि हामी यहाँ एकान्त ठाउँमा छौं।”
१३ तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूले नै उनीहरूलाई केही खान देओ।” तिनीहरूले भने: “हामी आफै गएर खानेकुरा नकिन्ने हो भने यी मानिसहरूलाई खुवाउन हामीसित पाँच वटा रोटी र दुई वटा माछाबाहेक अरू केही छैन।”
१४ त्यहाँ लगभग पाँच हजार पुरुष थिए। तर उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “तिनीहरूलाई पचास-पचासजतिको समूह बनाएर खान बसाओ।”
१५ तिनीहरूले त्यसै गरे र सबैलाई बस्न लगाए।
१६ त्यसपछि पाँच वटा रोटी र दुई वटा माछा लिई स्वर्गतिर हेरेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो अनि भीडलाई बाँड्‌नको लागि ती भाँचेर चेलाहरूलाई दिन थाल्नुभयो।
१७ तिनीहरू सबैले खाए र तृप्त भए। अनि तिनीहरूले उब्रेको टुक्राटाक्री जम्मा गर्दा बाह्र डालो भयो।
१८ पछि, उहाँ एक्लै प्रार्थना गरिरहनुहुँदा चेलाहरू एकसाथ उहाँकहाँ आए र तिनीहरूलाई उहाँले सोध्नुभयो: “भीडले म को हुँ भनी भन्दैछ?”
१९ तिनीहरूले जवाफ दिए: “कसैले बप्तिस्मा गराउने यूहन्ना, कसैले एलिया अनि कसै-कसैले चाहिं पहिले-पहिलेका भविष्यवक्ताहरूमध्ये जीवित भएका कोही एक।”
२० अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “त्यसोभए, तिमीहरूचाहिं म को हुँ भन्छौ?” पत्रुसले जवाफ दिए: “परमेश्वरको ख्रीष्ट।”
२१ अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसबारे कसैलाई नभन्नू भनी कडा चेतावनी दिनुभयो
२२ र भन्नुभयो: “मानिसको छोराले धेरै दुःख भोग्नु, धर्म-गुरुहरू, मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट तिरस्कृत हुनु अनि मारिनु र तेस्रो दिनमा ब्यूँतनु आवश्यक छ।”
२३ त्यसपछि उहाँले सबैलाई यसो पनि भन्नुभयो: “यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, दिनहुँ आफ्नो यातनाको खम्बा* उठाओस् र निरन्तर मेरो पछि लागोस्।
२४ किनकि जसले आफ्नो ज्यान बचाउन चाहन्छ, उसले त्यो गुमाउनेछ तर जसले मेरो खातिर आफ्नो ज्यान गुमाउँछ, उसले त्यो बचाउनेछ।
२५ हुन पनि, कुनै मानिसले सारा संसार प्राप्त गर्छ तर आफ्नो ज्यान गुमाउँछ वा आफूलाई हानि पुऱ्याउँछ भने उसलाई के फाइदा हुन्छ र?
२६ मेरो चेला बन्न र मेरा वचनहरूमा विश्वास गर्न जसले सरम मान्छ, मानिसको छोराले पनि आफ्नो बुबाको, आफ्ना पवित्र स्वर्गदूतहरूको अनि आफ्नो गौरवसहित आउँदा उसलाई स्वीकार्न सरम मान्नेछ।
२७ तर म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये कोही-कोही यस्ता छन्‌, जसले परमेश्वरको राज्य नदेखेसम्म कुनै हालतमा मृत्यु चाख्नेछैनन्‌।”
२८ हुन पनि यो कुरा भनेको लगभग आठ दिनपछि पत्रुस, यूहन्ना र याकूबलाई लिएर उहाँ डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो।
२९ उहाँले प्रार्थना गरिरहनुहुँदा उहाँको अनुहार फेरियो अनि उहाँको पोसाक चम्किलो सेतो भयो।
३० साथै, हेर, दुई जना उहाँसित कुराकानी गरिरहेका थिए, ती दुई मोशा र एलिया थिए।
३१ उनीहरू गौरवका साथ देखा परे र उहाँको बिदाइको विषयमा कुरा गर्न थाले, जो यरूशलेममा हुने निश्‍चित थियो।
३२ त्यसबेला पत्रुस र तिनीसित भएकाहरू निद्राले लट्ठ भएका थिए तर पूरै ब्यूँझिएपछि तिनीहरूले येशूको गौरव अनि उहाँसँगै उभिरहेका ती दुई जनालाई देखे।
३३ ती दुई जना उहाँलाई छोडेर जान लाग्दा, पत्रुसले येशूलाई भने: “गुरुज्यू, हामी यहीं बस्नु उचित हुन्छ। त्यसैले हामीलाई तीन वटा पाल टाँग्न दिनुहोस्। एउटा तपाईंको लागि, एउटा मोशाको लागि अनि एउटा एलियाको लागि।” तर तिनलाई आफूले के भनिरहेको छु, त्यसको हेक्का थिएन।
३४ तिनले यो कुरा भन्दाभन्दै बादल आएर तिनीहरूलाई ढाक्न थाल्यो। बादलले आफूलाई छोपेको देखेर तिनीहरू डराए।
३५ अनि बादलबाट यस्तो आवाज आयो: “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्‌, जसलाई मैले रोजेको छु। तिमीहरूले उनको कुरा सुन।”
३६ अनि जसै यो आवाज आयो, तिनीहरूले त्यहाँ येशूलाई एक्लै पाए। तर तिनीहरू चुपचाप बसे अनि आफूले देखेको कुरा ती दिनमा कसैलाई बताएनन्‌।
३७ त्यसको भोलिपल्ट, उहाँहरू डाँडाबाट ओर्लेपछि एउटा ठूलो भीडसित उहाँको भेट भयो।
३८ अनि हेर, एक जना मानिस भीडबाट यसो भन्दै करायो: “हे गुरुज्यू, बिन्ती छ, एक चोटि मेरो छोरालाई हेरिदिनुपऱ्यो, किनकि ऊ मेरो एउटै सन्तान हो।
३९ हेर्नुहोस्, एउटा दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई वशमा पार्छ अनि ऊ अचानक चिच्याउँछ र त्यसले उसलाई यसरी अँठ्‌याउँछ कि उसले फींज काढ्‌छ अनि उसलाई घाइते बनाएपछि मात्र त्यसले बल्लतल्ल छोड्‌छ।
४० त्यसैले मैले तपाईंका चेलाहरूलाई त्यसलाई धपाइदिन बिन्ती गरेको थिएँ तर तिनीहरूले सकेनन्‌।”
४१ तब येशूले जवाफ दिनुभयो: “ए विश्वास नभएको, टेढो पुस्ता, म तिमीहरूसित कतिन्जेल रहूँ र तिमीहरूलाई कतिन्जेल सहूँ? तिम्रो छोरालाई यहाँ ल्याऊ।”
४२ ऊ आउँदाआउँदै दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई भुइँमा पछाऱ्यो र बेस्सरी अँठ्‌यायो। तर येशूले त्यस दुष्ट स्वर्गदूतलाई हप्काउनुभयो र त्यस केटोलाई निको पारेर उसको बुबाको जिम्मा लगाउनुभयो।
४३ तब परमेश्वरको अपार शक्ति देखेर तिनीहरू सबै छक्क पर्न लागे।
उहाँले गरिरहनुभएका सबै कामहरू देखेर तिनीहरू अचम्म मानिरहेको बेला उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो:
४४ “यो कुरा कान थापेर सुन, मानिसको छोरालाई निश्चय नै धोका दिइनेछ अनि मानिसहरूको हातमा सुम्पिइनेछ।”
४५ यो कुरा तिनीहरूले बुझिरहेका थिएनन्‌, किनकि यसको अर्थ तिनीहरूबाट छिपाइएको थियो। साथै, उहाँलाई यसको अर्थ सोध्न तिनीहरू डराएका थिए।
४६ तब आफूहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो को हुनेछ भनेर चेलाहरूमाझ बहस चल्न थाल्यो।
४७ तिनीहरूको मनको कुरा थाह पाएर येशूले एउटा सानो बालकलाई बोलाउनुभयो र आफ्नो छेउमा राखेर
४८ तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “जसले मेरो नाममा यो सानो बालकलाई स्वीकार्छ, उसले मलाई पनि स्वीकार्छ; अनि जसले मलाई स्वीकार्छ, उसले मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि स्वीकार्छ। जसले तिमीहरूबीच आफूलाई सबैभन्दा सानो सम्झेर व्यवहार गर्छ, उही ठूलो हो।”
४९ यूहन्नाले भने: “गुरुज्यू, एक जना मानिसले तपाईंको नाम लिएर दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाइरहेको हामीले देख्यौं र उसलाई हामीले रोक्न खोज्यौं, किनकि ऊ हामीसँगै तपाईंको पछि लाग्दैन।”
५० तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू उसलाई रोक्न नखोज, किनकि जो तिमीहरूको विरुद्धमा हुँदैन, ऊ तिमीहरूकै पक्षमा हुन्छ।”
५१ उहाँ स्वर्ग जाने बेला नजिकै आउन थालेपछि उहाँले यरूशलेम जाने अठोट गर्नुभयो।
५२ त्यसैले उहाँले आफ्नो अघि-अघि सन्देशवाहकहरू पठाउनुभयो। अनि तिनीहरू आफ्नो बाटो लागे र उहाँको लागि बन्दोबस्त मिलाउन सामरीहरूको एउटा गाउँमा पसे।
५३ तर गाउँलेहरूले उहाँलाई बास दिएनन्‌, किनकि उहाँले यरूशलेम जाने अठोट गर्नुभएको थियो।
५४ यो देखेर उहाँका दुई चेला याकूब र यूहन्नाले भने: “प्रभु, तपाईंको इच्छा भए के हामी आकाशबाट आगो बर्सेर तिनीहरू भस्म होऊन्‌ भनी आज्ञा गरौं?”
५५ तर पछाडि फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुभयो।
५६ तब उहाँहरू अर्कै गाउँमा जानुभयो।
५७ उहाँहरू बाटोमा जाँदै गर्दा कोही एक जनाले उहाँलाई यसो भन्यो: “तपाईं जहाँ-जहाँ जानुहुन्छ, म त्यहाँ-त्यहाँ तपाईंको पछि लाग्नेछु।”
५८ तर येशूले उसलाई भन्नुभयो: “फ्याउरोहरूको ओडार हुन्छ र आकाशका चराचुरुङ्‌गीको गुँड, तर मानिसको छोराको भने शिर ढल्काउने ठाउँसमेत छैन।”
५९ त्यसपछि उहाँले अर्को एक जनालाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग।” त्यस मानिसले भन्यो: “पहिला मलाई गएर मेरो बुबालाई गाड्‌न दिनुहोस्।”
६० तर उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “मुर्दाहरूलाई मुर्दाहरूले नै गाडून्‌ तर तिमी भने गएर सबैतिर परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर।”
६१ अनि अर्को एक जनाले चाहिं यसो भन्यो: “हे प्रभु, म तपाईंको पछि लाग्नेछु तर पहिला मेरो घरपरिवारसित बिदा माग्न दिनुहोस्।”
६२ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “आफ्नो हात हलोमा राखेर पछाडि फर्केर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन।”
^ मत्ती १०:१४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ लूका ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।